Manipulator, tezitra, andevozin'ny firaisana ... Scorpio, ny mariky ny volana novambra nandinika, tokony hino ireo klika ve isika?
Manipulator, lolom-po, mpidoroka firaisana ... Scorpio, famantarana ny volana Novambra nojerena, tokony hino klinika ve isika?
Toy ny famantarana astrolojia rehetra, ny Scorpio indraindray dia mijaly noho ny clichés. Tena mila mino azy ireo ve anefa isika? Mifantoha amin'ny famantarana ny volana Novambra!
Raha liana akaiky amin'ny fanandroana isika, dia hitantsika fa ny planeta dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny fotoana nahaterahantsika. Marina tokoa, ny toerana misy azy ireo any an-danitra dia mety hisy fiatraikany miavaka amin'ny toetrantsika. Antsoina hoe tabilao nahaterahana io. Na dia ny ankamaroan'ny olona aza tsy mahalala afa-tsy ny fambara sy ny fiakarany, fantaro fa tena voataonan'ireo famantarana rehetra mandrafitra ny zodiaka. Sarotra noho izany ny mahafantatra ny tenanao amin'ny famantarana ny masonao na dia manasongadina ny fomba fihetsika aza.. Ary raha afaka mahita ny namanao akaiky indrindra ianao amin'ny alàlan'ny fanandroana, andao hifantoka amin'ny famantarana ny scorpio. Matetika voatsikera sy diso fanamelohana, na izany aza, io famantarana rano io dia iray amin'ireo sarotra indrindra!
Raha teraka teo anelanelan'ny 23 Oktobra sy 22 Novambra ianao dia teraka teo ambanin'ny mariky ny maingoka. Ary tsy hifampandainga isika, fa mandre azy fotsiny dia mety ho diso hevitra ny olona. Tokony holazaina fa ny maingoka dia tsy manana ny tsara laza ary nanao izany hatrizay. Ampangaina ho tezitra izy, manodikodina, manao firaisana, mahery setra ary mamitaka. Na izany aza, io dia hampihena be an'io famantarana io, raha ny tena izy, be pitsiny tokoa.. Amin'ny natiora, maingoka dia olona mahery vaika. Na azy izany fihetseham-po na ny zava-bitany, hiaina zavatra 1000% izy. Saingy hita taratra amin'ny eritreriny koa io hamafiny io. Afaka mieritreritra mandritra ny ora maro momba ny lohahevitra mitovy izy, ny olana mitovy, ny famakafakana azy ireo ary ny fanaparitahana azy ireo tanteraka mba hivoahana zavatra iray avy amin'izy ireo. Mampatahotra azy tanteraka izany.
Raha ny marina, ilay maingoka dia tompon'ny fiandrasana ary matetika ny fihetsem-pony dia mahery vaika na dia aleony manafina azy ireo amin'ny sarany rehetra. Raha ny tena izy, io fambara rano io dia tena saro-pady ary matahotra mihoatra ny zava-drehetra hamadihana. Ary raha miafara amin'ny maha olona azy izy, ny faniriany hamaly faty dia tsy hitoviana, izay manazava hoe avy aiza ny lazany. Saingy izy koa dia psikology miavaka izay tsy misy ny filaharany tanàna refesina. Sarotra ny manafina na inona na inona aminy satria na izy tenany aza tena hahomby amin'ny fanafenana ny tsiambaratelony dia hanana an'io fanomezana io izy hanosehana anao hampiharihary aminy ny momba anao rehetra. Tokony holazaina fa tsy mody izy ary tsy ho hitanao hoe antonony mihitsy izy. Ho an'ny maingoka dia tsy misy refy ny antsasany. Mainty na fotsy ny raharaha ary dia izay!
Ary eny, andao hatrehana izany: ny firaisana dia zava-dehibe amin'ny maingoka. Tiany ny manintona ary matetika mahafaly noho ny hatsarany sy ny mistery manodidina azy ary hainy ny milalao tsy misy olon-kafa. Tiany ny mahita ara-batana ireo mpiara-miasa aminy satria fifandraisana matanjaka izay mihoatra ny fisehoana, izay saika ara-panahy. Raha ny lafiny manipulative dia avy amin'ny fahaizany mahatakatra ny iray hafa indray mipi-maso izy io, hahafantatra izay holazaina ary inona no hatao amin'ny toe-javatra tsirairay ary izany satria azo ovaina ifotony izy. Ary raha toa sarotra aminao izy indraindray, ny heriny ihany koa izany. Aza adino fa ny scorpion dia famantarana ny fahaterahana indray. Na inona na inona hanjo azy dia ho vitany ny mandresy vato misakana hatrany, miverina mitsangana ary mijoro amin'ny tongony roa.
Ary matetika kokoa, ny maingoka dia hampiasa ny fisainany hanao soa sy hanampiana ireo olon-tiany na dia hainy aza ny manindrona sy manohina izay maharary azy koa. Izy dia namana mahafoy tena izay mety ho mpiara-miasa aminao manandanja indrindra rehefa mahatsapa ianao fa tsy hiala amin'io mihitsy. Ary na dia manana lolompo aza izy, dia miaro tena indrindra. Satria arakaraka ny hanomezan'ny scorpion anao ny fahatsapanao ho mafy sy mangatsiaka, dia vao mainka miboiboika avy ao anatiny izany. Fa rehefa mahazo ny fitokisany ianao dia homeny anao samirery ny zava-drehetra, izay tsy hahasakana azy tsy ho saro-piaro sy hanana fananana be loatra. Satria tsy matoky tena loatra izy amin'izay lazainy momba izany. Koa manehoa hatsaram-panahy aminy satria tsy hivadika aminao mandrakizay izy. Ary raha te hahalala misimisy kokoa ianao dia ity misy ny fitiavan'ny astro anao any an-tsekoly ho anao miankina amin'ny famantarana anao.
Ny zava-miafina nataon'i DJ ARAFAT dia namoaka ny fahafatesan'ny hafatra tao amin'ity horonan-tsary ity dia hahagaga anao tokoa - Video
Tsarà fetin'ny Firenena Mikambana! Jereo ny masoivoho Celeb toa an'i Angelina Jolie, Orlando Bloom ary maro hafa! - Lahatsary